Shirkii golaha wasiirada Soomaaliya oo qodobo laga soo saaray. – Radio Daljir
Luulyo 14, 2016 5:48 b 0
July 14, 2016……Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii joogtada ahaa, waxaana kulanka shir guddoominayay Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Maxamed Cumar Carteh. Shirka ayaa looga dooday qodobo kala duwan, iyadoo warbixin la xiriirta amniga guud ee dalka iyo howlgallada ay wadaan Ciidamadda Qalabka sida laga dhageystay Wasaaradda Gaashaandhigga.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane C/qaadir Sheekh Cali Diini, ayaa golaha Wasiirada warbixin ka siiyay xaaladda guud ee amniga dalka, waxana uu si gaar ah u xusay howlgal qorsheysan oo Ciidamadda gaarka ah ee Danab ay ka fuliyeen deegaanka Goobaale oo 80 KM u jira Ballidoogle halkaas oo saldhigyo qarsoodi ah ay ku lahaayeen kooxaha Argagixisada. Wasiirka ayaa tilmaamay in la burburiyey saldhiggaasi isla markaana lagu dilay saraakiil iyo malayshiyaad ka tirsan Argagixisada.
DHEGEYSO-Reer Hiiraan oo qaadacay qorshaha IGAD ee maamul u samaynta Hiiraan iyo Sh.dhexe.